ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး စားကြည့်လိုက်တာ
ရလဒ်က သုညနဲ့ 
Posted by Kaung Kin Ko at 3:34 PM
ရလာဒ် သုညတဲ့ လား
ရင်ဘတ်ကြီး စုတ်ပြတ်သတ်လို့ ပေါ့
လောကဓံ တရား ထုထောင်းတာလေ
နေရတဲ့ ဘ၀ ထုသား
အချစ် သမိုင်းလည်း မရိုင်းပါဘူး
good poem. whatabeautiful
ဘောဇ ဘုရင်ရဲ့ အမာရွတ်မျိုးဆိုရင်တော့...
အတွေးတွေ အရေးတွေ စာလုံးသုံးထားတာတွေ တိုတိုလေးနဲ့ ထိထိမိမိ တကယ်ကို နှစ်သက်မိပါတယ်။
ဒါလား ၊ အမာရွတ်ပါ။
အမာရွတ်တွေတောင် ကြွင်းသလား အကိုရ ...
ကဗျာတွေ တ၀ ဖတ်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးပါ
လတ်တလော ကဗျာတွေ မရေးဖြစ်သေးပေမယ့် ...
ကဗျာအပေါ် နှစ်သက်တဲ့ ရီညွှတ်စိတ်ကတော့ ...
သွေးညှီနံ့ရတဲ့ ဓားလို စိတ်တစ်ခုလုံး
လက်လက်ထ သွားရတယ် ... :)
ဘယ်တော့မှ မပျောက်နိုင်မယ့်အမာရွတ်မျိုးပေါ့ဗျာ... အထူးသဖြင့်ထားခဲ့ပြီးထွက်သွားရတဲ့သူက ပိုနာကျင်ပါတယ် ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမာရွတ်တောင် ပျောက်ဖို့ လပေါင်းများစွာကြာသေးတာပဲ နှလုံးသားပေါ်က အမာရွတ်ကတော့ သေရာပါမှာ မလွဲပါပဲ
ကဗျာလေးက တကယ်ခံစားရပါတယ် ကိုကောင်းကင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
Shinehnin Phyu said...
nice and beautiful taught.
"ပျော်ရွှင်မှုကိုတည် အချိန်ကာလနဲ့စားလို့ အကြွင်း နာကျင်မှု ကျန်နေမည်ဆိုလျှင် ဤပု စ္ဆာ အား ငါမတွက်လို...။"
ကျနော် ရေးဘူးတဲ့စာသားလေးပါ..။ ကိုယ်အရမ်းသဘောကျတဲ့ ကဗျာဆရာတစ်ယောက်စီမှာ ခပ်ဆင်ဆင်လေးတွေ့မိလို့ ၀မ်းသာလို့..လာပြီး ကွန်မန့်ချန်လိုက်တာ။ အကို့ကဗျာတော်တော်များများ ကျနော် ကူးပြီး ဖြန့်လေ့ရှိတယ်..။ ခွင့်ပြုမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..။
ဟုတ်။ White ရဲ့ကဗျာလေးလည်း ကောင်းတယ်ဗျ။ ကဗျာတွေ ဖြန့်ဝေပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။း-)